မောင်သစ္စာ - အဝေဖန် မခံချင်ရင် အဝေဖန်လွတ်အောင် လုပ်ပါ - MoeMaKa Media
Home / Currents / Maung Thit Sar / Opinion / မောင်သစ္စာ - အဝေဖန် မခံချင်ရင် အဝေဖန်လွတ်အောင် လုပ်ပါ
မောင်သစ္စာ - အဝေဖန် မခံချင်ရင် အဝေဖန်လွတ်အောင် လုပ်ပါ
Currents, Maung Thit Sar, Opinion
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ KBC ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်တို့ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က မန္တလေးမှာ တွေ့ဆုံစဉ် - ဓါတ်ပုံ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံ
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၉
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတစုနဲ့ အသိ်ုင်းအဝိ်ုင်းတို့ဟာ အာဏာတည်မြဲရေး၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကြောင့် ကျရောက်လာမယ့် အပြစ်ဒဏ်များမှ ရှောင်လွှဲရေး အတွက် အပြောတမျိုး၊ အလုပ်တမျိုးလုပ်၊ ဆင်ခြေအမျိုးမျိုး ပေးပြီး လိမ်ညာလှည့်စား လက်တလုံးခြား လုပ်ခဲ့တာလည်း များလှပါပြီ။ သူတို့ကြောင့် ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသားပြည်သူတွေလည်း ဒုက္ခရောက် ပေါင်းလည်း များနေပါပြီ။ ပြည်တွင်းသာမက၊ နိုင်ငံတကာကပါ ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြတာလည်း များလှပြီ၊ ခုထိ အပြောရော အလုပ်ပါ မလျော့ကြသေးဘူး၊ ဆင်ခြင်ဖို့ ကောင်းပြီ။ “ယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက်” ဆိုသ လို “ပြောသူမရှက်ပေမယ့်၊ ကြားသူအနေနဲ့ ရှက်မိပါတယ်”။
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရတလဲလို့ ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ် ချုပ် အုပ်စုဟာ အတ္တလွန်ကဲပြီး ရာထူးအာဏာ မက်ကြ၊ အရှက်မဲ့ကြ၊ ရာထူး အာဏာ အရှက်မဲ့ရာက အာဏာရူး ရူးကြ၊ အာဏာရူး ရူးရာက အာဏာယစ်မူးပြီး လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်လာကြ တယ်။ သူများက ပြစ်တင်ဝေဖန်လည်း မဆင်ခြင်ဘဲ ငါတို့လောက် မသိ၊ ငါတို့လောက် မတတ်ဘူး ထင်ပြီး ထင်ရာစိုင်းလာကြသလို အမှားအယွင်းတွေလည်း များသည်ထက် ပိုများလာတော့တယ်။ သူတို့ကို ဝေဖန်သူတွေကိုလည်း အပြစ်အမျိုးမျိုးရှာ၊ ဥပဒေအမျိုးမျိုး တပ်ပြီး တရားစွဲ၊ ဖမ်းဆီး ချုပ် နှောင်ကာ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်တာတွေ မကြာခဏ တွေ့နေ ကြားနေရတာ များလှပါပြီ။
စွဲချက်တင်ခံရသူနဲ့ စွဲချက်တင် မခံရသူများ။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စစ်တပ်ကို ဝေဖန်သူမှန်သမျှကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု (သို့) စစ်တပ်အကြည်ညို ပျက်စေမှု (သို့) စစ်တပ်အကျိုး ပျက်စေမှု၊ (သို့) ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ တခုခုနဲ့ စွဲချက်တင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စစ်တပ် ဘက်တော်သားတွေ မှန်သမျှကိုတော့ သူကောင်းပြုကာ မြှောက်စားကြတယ်။ ပြဿနာ ဖြစ်လာရင်တောင် သူတို့က “ကွယ်ဖွက်” ထားပေး သေးတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး သာဓကမှာ -
- မန္တလေး၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က အာကျယ်စွာကျယ်လေး ဦးဝီရသူနဲ့ ဘူးလက်လှဆွေတို့ ဖြစ်တယ်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အမှားအယွင်း လုပ်ရပ်တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ မိမိ အလုပ်ထက် ကျော်လွန်ပြီး ပြောဆိုု လုပ်ကိုင်တာတွေကို ဝေဖန် ထောက်ပြသူတွေ ဥပဒေ အမျိုးမျိုးနဲ့ စွဲချက်တင်ခံရပါတယ်။
စွဲချက်တင်ခံရသူတွေထဲက အချို့မှာ -
- ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ကိုနေမျိုးဇင်၊
- ဒီမိုကရေစီ စဉ်ဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားမှု အင်အားစုအဖွဲ့ (MDCF) ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထင်ကျော်နဲ့ အဖွဲ့ဝင် မစိန်ထွေး၊ ကိုကျော်ဇင်လတ်၊ ဦးတင်မောင်ကြည် … စသူတို့၊
- ဒေါင်းတို့ မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုဇေယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုပိုင်ဖြိုးမင်း၊ ကိုဇော်လင်းထွဋ်၊ ကိုငြိမ်းချမ်းစိုး၊ မဆုရတနာမြင့်၊ မကေခိုင်ထွန်း … စတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေ၊ အဲလို စွဲ ချက် တင်ခံရသူတွေထဲမှာ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သာသနာပြု လုပ်ငန်များကို ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်စားသူ အချောင်သမားမဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးယောင် အစားချောင်အောင် လုပ်နေသူများမဟုတ်ကြပါ။ ထိုသန့်ရှင်း မွန်မြတ်တဲ့ ဆရာတော် များမှာ -
- မန္တလေး၊ မလိခ ဝါဆိုကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးစိန္တိတ၊
- ဘဝအလင်းရောင် ဆရာတော် ဦးသောဘိတ၊
- မန္တလေးမြို့၊ မြဝတီမင်းကြီးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီး အရှင်အရိယဝံသာဘိဝံသနဲ့၊
- ကချင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန် … စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုနဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုးထက် သူတို့ စစ်ဗိုလ် ချုပ်အုပ်စု ကောင်းကျိုးကိုသာ ဦးစားပေးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ကြုံကြိုက်တုန်း အပြု သဘောနဲ့ ဝင်ရောက် ဝေဖန်ထောက်ပြကြတာ ဖြစ်တယ်။
တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုး ရှေးရှု၍ ဝေဖန်သူများထဲမှ အချို့။
ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံက တရားမဝင်ဘဲ ရပ်တည်နေတဲ့ မဘသ အမည်ပြောင်း ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ (ဗ.ဓ.ပ) ဗဟိုကို ၂၀၁၉ -၆-၁၇ ရက်နေ့က ငွေ ကျပ်သိန်း (၃၀ဝ) လှူဒါန်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မန္တလေး၊ မြဝတီမင်းကြီး ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အရှင်အရိယဝံသာဘိဝံသ၊ ဘဝအလင်းရောင်း ဆရာတော် ဦးသောဘိတ၊ မလိခ ဝါဆိုကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးစိန္တိတ စတဲ့ ဆရာတော်များက ဝေဖန်ထောက်ပြကြပါတယ်။
၁။ မြဝတီမင်းကြီးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဝေဖန်မှုအချို့ ။
- ဗ.ဓ.ပ. ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ပိတ်ဆို့လိုသည့် တပ်မတော် အရာရှိများထံမှ အလှူငွေများ လက်ခံခြင်းဖြင့် သံဃာ့စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း၊
- တပ်မတော်သည် သူခိုး ဓားပြဖြစ်ကြောင်း၊
- သမ္မတ၏ အမိန့်ကိုလည်း မနာခံကြောင်း၊
- လက်နက်အားကိုးဖြင့် ပြည်သူလူထုကို အနိုင်ကျင့်ကြောင်း၊
- ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဘဲ လွှတ်တော်တွင် နေရာဝင်ယူထားကြောင်း.. စသဖြင့် ဝေဖန်ထားသည်။
ဆရာတော်ကြီးက အဲလို ဝေဖန်တဲ့အတွက် အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က ဒုဗိုလ်မှူးကြီး သော်တာထွေးက ဆရာတော်ကြီးအား “တပ်မတော် အသရေဖျက်မှု”နဲ့ မန္တလေးတွင် တရားစွဲပါတယ်။ (Irrawaddy, 13-9-2019)
အဲလို ဆရာတော်ကြီးအား စစ်တပ်က တရားစွဲဆိုမှုကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြောင်း အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၂၇၅)ဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပါသည်။ (Khit Thit News Agency, 13-9-2019)။
အဲလို စစ်တပ်ကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချရခြင်းမှာ -
- ဆရာတော်ကြီးဟာ သက်ကြီးဝါကြီး၊ ပညာရှိကြီး၊ ဂုဏ်သရေရှိ ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်ခြင်း၊
- သီလ သမာဓိ ပညာနဲ့ ပြည့်စုံခြင်း၊
- ကျင့်ဝတ် သိက္ခာတော်နဲ့ ပြည့်စုံခြင်း၊
- ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆရာ တော်ကြီး ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆရာတော်၏ တပည့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများနဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၂၇၅)ဖွဲ့တို့က ဆရာတော်ကြီး၏ ဝေဖန်မှုများကို ထောက်ခံပြီး စွဲဆိုထားမှုများကို ပြန်ရုပ်သိမ်း ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး၏ အမှုကို အောက်တိုဘာ-၁၆ ရက်နေ့တွင် လက်ခံ မခံ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ (Khit Thit News Agency, Oct-1-2019)။
ဆရာတော်ကြီး ရရှိထားတဲ့ ဘွဲ့ထူးများ။
- စေတီယင်္ဂဏ ဓမ္မာစရိယ (ဝဋံသကာ)၊
- သကျသီဟ ဓမ္မာစရိယ၊
- သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ-တို့ ဖြစ်ပါသည်။
မြဝတီမင်းကြီး ကျောင်းတိုက် ပဓာန နာယက ဆရာတော်ကြီး အရှင်အရိယဝံသာဘိဝံသသည် နှစ်ပေါင်း (၁၀ဝ)အတွင်း (၁၁)ပါးသာ ရရှိခဲ့သော စေတီယင်္ဂဏ ဓမ္မာစရိယ (ဝဋံသကာ)ဘွဲ့ရ ဆရာ တော်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကချင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ပြောဆိုမှု။
KBC ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်က ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နာ ထရမ့်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောတာက -
- တပ်မတော်က ဘာသာရေးကို ဖိနှိပ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊
- တပ်မတော် ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအပေါ် အရေးယူ ပိတ်ဆို့သည်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း … စတဲ့ အချက်(၅)ချက် ပါဝင်ပါတယ်။ (Irrawaddy, 13-9-2019)။
KBC ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်က အမေရိကန်မှာ သမ္မတ ဒေါ်နာထရမ့်ကို စစ်တပ် မကောင်းကြောင်း ၂၀၁၉-၆-၁၈ ရက်နေ့က ပြောကြားတဲ့အတွက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက “အသည်း ကျွဲ ခတ်”သလို နာကြည်းပြီး မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က ဒုဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထိုက်က ၂၀၁၉-၈-၂၆ ရက်နေ့မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တရားရုံးမှာ လျှောက်ထား စွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ (Khit Thit News Agency, 13-9-2019)။
KBC ဥက္ကဋ္ဌ ပြောတာ အပိုတခွန်းမှ မပါ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေချည်း ဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်က ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အပါအဝင် အခြားဘာသာဝင်တွေကိုပါ ဖိနှိပ်တာ အမှန်ပါ၊ အထူးသဖြင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင် တွေ အများဆုံး ခံကြရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား ဒေသခံတွေလည်း အလူးအလဲ ခံကြရ ပါတယ်။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ် အေးဒင်ရွာမှာ ဒေသခံ မူစလင် (၁၀)ယောက်ကို တစု တည်း သတ်ဖြတ်တာ ၂၀၁၈ - ခုနှစ်က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂူတာပြင် ကျေးရွာမှာ လူ ရာနဲ့ချီပြီး သတ်၊ အလောင်းတွေကို နေရာ(၅)နေရာမှာ မြှုပ်၊ ရုပ်လုံးမပေါ်အောင် မျက်နှာတွေကို အက်စစ်ရေ လောင်းကာ ဖျက်ဆီးထားခဲ့ကြတယ်။
အထက် ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို AP သတင်းဌာနက ၂၀၁၈-ဖေဖော်ဝါရီလ-၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဖော် ရေးသား ဖော်ပြထားတာကို Myanmar Now သတင်းဌာနက 1-Sep-2019 မှာ ထပ်မံ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
၃။ ဘဝအလင်းရောင် ဆရာတော် ဦးသောဘိတရဲ့ ဝေဖန်မှု။
ဆရာတော် ဦးသောဘိတက facebook ကနေ
-စက်တင်ဘာ-၉ ရက်နေ့က အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ နယ်လှည့်ဆေးကု အဖွဲ့က မြ တောင် ကျောင်းတိုက်အတွင်း ဆေးကုတာကို “စေတနာတွေ မှန်ကန်ဖို့ လိုတယ်” လို့ ဝေဖန်တယ်။
- ၂၀၁၈-စက်တင်ဘာလ-၁၁ ရက်နေ့ ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်ရှေ့ မျက်နှာမှာ - “တပ်မတော်စွမ်းမှ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမည်”လို့ ရေးပြီး ဗီနိုင်းနောက်ကျောတွင် “ခြေတုတပ် စစ်မှုထမ်းဟောင်းပုံ တင်ပြီး “တပ်မတော်က မစွမ်းဘဲ ခိုးတော့ တိုင်းပြည်မွဲတာပေါ့”လို့ ရေးတယ်။
-၂၀၁၈-စက်တင်ဘာ-၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ တပ်ချုပ်က နို့စားနွား မွေးမြူရေးခြံတခုအတွင်း မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးနေသည့်ပုံကို “နွားခြံထဲ နွားဝင်နေသည်”လို့ ရေးသားခဲ့တာကို Myanmar Now သတင်းဌာနက ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ မှာ ထပ်မံ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲလို ရေးသားတာတွေကြောင့် ဆရာတော် ဦးသောဘိတကို အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ ပြည်သူ့စစ်မှ ဦးစီးအရာရှိ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးနိုင်ဝင်းက ၂၀၁၈-၉-၂၃ ရက်နေ့က အမရပူရ မြို့မရဲစခန်းမှာ တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ (ဒါပေမဲ့ အမှုတွေ ဒီနေ့အထိ အပြီးပြတ် မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။)
မြဝတီမင်းကြီး ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အမှုကို အောက်တိုဘာ-၁၆ ရက်နေ့ ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ် တရားရုံးမှာ လက်ခံ၊ မခံ ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Khit Thit News Agency, Oct-1-2019)။
2019-Oct-16 ရက်နေ့မှာ တရားရုံးက စွဲထားတဲ့အမှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်က ပြည်ပ(အမေရိကန်)မှာ စစ် တပ် ကို ဝေဖန်တာ၊ မြဝတီမင်းကြီး ဆရာတော်ကြီးက ပြည်တွင်းမှာပင် ဝေဖန်တာဖြစ်တဲ့အပြင် ဝေဖန် တဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ် ဦးတည်ချက်ကလည်း ဆင်တူနေတာကြောင့် ဆရာတော်ကြီးအားလည်း ဒေါက် တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန် နည်းတူ အမှုကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ဆရာတော်ကြီးအား စွဲဆိုထားမှုကို ပြန်မရုပ်သိမ်းပါက တပ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အခြား စစ်တပ် ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေကို FFM, ICC, ICT, IIFFM …. စတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက အရေးယူတော့မှာ သေချာနေပါပြီ။ အခုလောလောဆယ်မှာတောင် အမေရိကန် က တပ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အခြား စစ်တပ် ထိပ်သီး (၃)ယောက် - ပေါင်း (၄)ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အရေးယူ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှောင်လွှဲတဲ့ အနေနဲ့ မူစလင်အဖွဲ့တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ ခရစ်ယာန်အသင်းတွေ၊ အခြားကျောင်းတွေကိုပါ ဟိုဟာလှူ၊ ဒီဟာလှူနဲ့ အပြစ်ပေါ့အောင် ဟန်ပြလုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့က ဒီလို ဟန်ပြ လှူနေ တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်က ဒီလိုမျိုး တခါမှ လှူဒါန်းတာမျိုး မရှိခဲ့ ဘူး။ သူတို့က မူစလင်လူမျိုးတွေ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကချင် စတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ စစ်တပ်က လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ချိုးဖောက်တာတွေ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေကြောင့် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မတီ စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အရေးယူတော့မယ့် အခြေအနေရောက်မှ အပြစ် ပေါ့အောင်၊ သူတို့က မူစလင်တွေ၊ ခရစ်ယာန် စတဲ့ ဘာသာဝင်တွေကို တကယ် စေတနာနဲ့ လှူဒါန်း တယ် ဖြစ်အောင် ကမန်းကတန်း ထပြီး လှူဒါန်းပြတယ်။ သူတို့ ဒီလို လှူဒါန်းတာတွေဟာ သူတို့ ချွေး နည်းစာထဲက လှူဒါန်းတာမဟုတ်လို့ ဘာမှ အထင်ကြီးစရာ လုံးဝမရှိပါဘူး။
အဲဒီတော့ နောက်ထပ် အပြစ်ဒဏ် အချမှတ် မခံချင်ရင်၊ ထပ်မံ အဝေဖန် မခံချင်ရင်၊ ထပ်မံ နာမည်မပျက်ချင်ရင် ဆရာတော်ကြီးအား ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း အမှုကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ နောင် လည်း အပြောလွတ်အောင်၊ အဝေဖန်လွတ်အောင် လုပ်ပါ ပြောပါ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ဖို့၊ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလို ဝန်တိုစိတ် စွန့်ဖို့ အပြင်း အထန် တောင်း ဆိုလိုက်ရပါကြောင်း။
မောင်သစ္စာ - အဝေဖန် မခံချင်ရင် အဝေဖန်လွတ်အောင် လုပ်ပါ Reviewed by MoeMaKa on 10:06 AM Rating: 5